BURMESE TITLE | Real Conversion
တရား‌ဒသေနာစာမူကို လော့ဈအိနျဂယျြလျရှိ Baptist Tabernacle အသငျး‌တော်၌ ၂၀၂ဝခုနှဈ ဇှနျ (၁၁)ရကျ၊ သခငျဘုရား၏‌ည‌နပေိုငျးတှငျ ဝါရင့်သငျးအုပျဆရာ Dr. R. L. Hymers, Jr. က ဟောပွောသညျ။
“မိတ်တဲ၏သား ယောနသို့ရောကျလာသော ထာဝရဘုရား၏ နှုတျကပတျတော်ဟူမူကား၊ သငျထ၍ နိနဝေမွေို့ ကွီးသို့ သှားပွီးလျှငျ၊ ခွိမျးချောကျသောစကားနှငျ့ ကွှေးကွော်လော့။ ထိုမွို့ပွုသော ဒုစရိုကျအပွဈသညျ ငါ့ရှေ့ သို့ တကျလာပွီဟု မိနျ့တော်မူ၏။” (ယောန၁း ၁-၂)
ယောနကမျြးသညျ ပရောဖကျယောနကိုယျတိုငျ ရသေားထားသည့်စာအုပျဖွဈပါသညျ။ ၎င်းငျးသညျ ယောန၏ အတှေးအခေါ်များ၊ ဆုတောငျးခွငျးများကို ဖော်ပွပေးသောကွောင့် ယောနကိုယျတိုငျမှလှဲ၍ အဘယျသူမျှမသိနိုငျပါ။‌ ဓမ်မရာဇဝငျစတုတ်ထစောငျ ၁၄း၂၅ တှငျ ရှေးဟောငျးဆရာများက သူ့ကို “မိမိကျွနျ ဂါသဖောမွို့န၊ေ အမိတ်တဲ၏သား ပရောဖကျ ယောန”ဟူ၍ ခေါ်ဆိုသောအခါ၊ ယောနသညျ သမိုငျးဆိုငျရာ ပုဂ်ဂိုလျတဈယောကျဖွဈကွောငျး ဓမ်မရာဇဝငျ စတုတ်ထစောငျ ၁၄း၂၄-၂၅ တှငျ ဖော်ပွပါသညျ။ သခငျယရေှု ကိုယျတိုငျ ယောန၏အကွောငျးကို ပွောခဲ့သညျ။ ကျေးဇူးပွု၍ ရှငျမဿဲ ၁၂း၃၉-၄၁ကို လှနျထားပွီး၊ သခငျယရေှုပွောပွသည့်ယောနအကွောငျးကို ကျွနျတော်ဖတျရှုသောအခါ အားလုံး မတျတပျရပျပေးကွ ပါ။
“ကိုယျတော်က ဆိုးညဈ၍မျောကျမထားသောအမျိုးသညျ နိမိတျလက်ခဏာကို တောငျးသညျမှာ၊ ပရောဖကျယောန၏ နိမိတျလက်ခဏာမှတပါး အဘယျလက်ခဏာ ကိုမျှ သူတို့အားမပွရာ။ ယောနသညျ ငါးကွီးဝမျးထဲမှာ သုံးရကျနရေသကဲ့သို့၊ လူ သားသညျ မွကွေီးထဲမှာ သုံးရကျနရေလတံ့။ တရားဆုံးဖွတျတော်မူသောအခါ၊ နိနဝေမွေို့သားတို့သညျ ဤလူမျိုး တဘကျ၌ထ၍ အရှုံးခံစလေတံ့။ အကွောငျးမူ ကား၊ ထိုမွို့သားတို့သညျ ယောနဟောပွောသောစကားကွောငျ့ နောငျတရကွ၏။ ဤအရပျ၌ကား၊ ယောနထကျသာ၍ ကွီးမွတျသောသူရှိ၏။” (ရှငျမဿဲ ၁၂း၃၉-၄၁)
အားလုံးဆကျလတျမတျတပျရပျ၍ လုကာ ၁၁း၂၉-၃၀ သို့ သှားပါ။
“လူအစုအဝေးတို့သညျ ထူထပျလကျြရှိကွသောအခါ ကိုယျတော်က၊ ဤလူမျိုး သညျ ဆိုးညဈသောအမျိုးဖွဈ၏။ နိမိတျလက်ခဏာကို တောငျးသညျမှာ ပရောဖကျ ယောန၏ နိမိတျလက်ခာမှတပါး အဘယျလက်ခဏာကိုမျှ သူတို့အားမပွရာ။ ယောန သညျ နိနဝေမွေို့သားတို့အား နိမိတျလက်ခဏာ ဖွဈ သကဲ့သို့ လူသားသညျ ဤလူ မျိုးအား ဖွဈလိမျ့မညျ။” (လုကာ ၁၁း၂၉-၃၀)
ဓမ်မရာဇဝငျစတုတ်ထစောငျ ၁၄း၂၅က ယောန၏သမိုငျးဆိုငျရာ အခကျြအလတျများကို ပေးသညျ။ လုကာ ၁၁း၂၉-၃ဝက ယောနကိုသကသေလက်ဏာတဈခုနဖွေင့် သခငျယရေှု၏ထုတျဖော်ခကျြကိုပေးပွီး ရှငျမဿဲ၁၂း၃၉-၄၁က ခရဈတော် ၏သခွေငျး၊ သဂွိုလျခွငျး၊ သုံးရကျမွောကျသောနေ့၌ ရှငျပွနျထမွောကျ ခွငျးနှင့်ပါတျသတျ၍ ယောန၏လက်ခဏာကို ပေးသညျ။ ဓမ်မာဟောငျးကမျြးက ယောနကိုလူပုဂ်ဂိုလျစဈ တဈပါးအနဖွေင့်ဖော်ပွပွီး ယရေှုသညျ ယောန၏သခွေငျးနှင့်ရှငျပွနျ ထမွောကျခွငျးကို သူ၏သခွေငျးနှင့် ရှငျပွနျထမွောကျခွငျး၏ ပရောဖကျပွုခကျြဖွဈကွောငျး ပွောခဲ့ပါသညျ။
Sir Winston Churchill က “ကျွနျုပျတို့သညျ ပရိုဖကျဆာ Gradgrind နှင့် Dr. Dryasdust တို့၏ စာအုပျများကို ယုံကွညျမှုရှိနဆေဲဖွဈသညျ။ ဤအရာအားလုံးသညျ သန့်ရှငျးသောဝိညာဉျတော်အားဖွင့်(သမ်မာကမျြးစာ) ဖွဈပကျြခဲ့သညျကို ကျွနျုပျတို့သခေျာပွောနိုငျပါလိမ့်မညျ။ (Dr. J. Vernon McGee မှ ကောကျနှုတျ၊ ကမျြးစာ၊ အမှတျ ၃၊ ယောနမှတျစု၊ လမျးညှနျ၊ စာမကျြနှာ ၇၃၈)
“မိတ်တဲ၏သား ယောနသို့ရောကျလာသော ထာဝရဘုရား၏ နှုတျကပတျတော်ဟူမူကား၊ သငျထ၍ နိနဝေမွေို့ကွီးသို့ သှားပွီးလျှငျ၊ ခွိမျးချောကျသောစကားနှငျ့ ကွှေးကွော်လော့။ ထိုမွို့ပွု သောဒုစရိုကျအပွဈ သညျ ငါ့ရှေ့သို့ တကျလာပွီဟု မိနျ့တော်မူ၏။” (ယောန၁း၁-၂)
“သို့သော်လညျး၊ ယောနသညျ ထာဝရဘုရားထံတော်မှ တာရှုမွို့သို့ပွေး မညျ့အကွံရှိသညျနှငျ့ ထလကျြ ယုပ်ပမွေို့သို့သှား၍ ရောကျသဖွငျ့၊ တာရှုမွို့ သို့သှားသောသင်ျဘောကို တှေ့ကွုံ၍ သင်ျဘောခကို ပေးပွီးလျှငျ၊ ထာဝရဘုရားထံတော်မှ သင်ျဘောသားတို့နှငျ့အတူ တာရှုမွို့သို့ လိုကျခွငျးငှါ သင်ျဘောကို စီးလ၏ေ။” (ယောန ၁း၃)
ဤပုဂ်ဂိုလျကို ကျွနျတော်နားလညျကွောင့် ယောနစာအုပျငယျလေးသညျ ဓမ်မဟောငျးကမျြးမှ ကျွနျတော့်အကွိုကျ ဆုံးစာအုပျတဈအုပျဖွဈပါသညျ။ ဘုရားသခငျမကျြမှောကျတော်မှ ယောနထှကျသှားခဲ့ သညျ။ ကျွနျတော်က သူကဲ့သို့မလုပျ ခဲ့ပါ။ သာသနာပွုဆရာတဈယောကျအနဖွေင့် ဘုရားသခငျသညျ ကျွနျတော့်ကိုခေါ်ကွောငျးကို ကျွနျတော်သိခဲသညျ။ သို့ သော်လညျး ကျွနျတော်သညျ ဆငျးရဲသောကျောငျး သားဖွဈသောကွောင့် ကောလိပျမှဘှဲမရနိုငျတော့မှနျး ကျွနျတော်သိခဲ့ သညျ။ တောငျပိုငျးနှဈခွငျး သာသနာပွုဆရာတဈဦးဖွဈရနျ ဘှဲ့ရကျောငျးသားတဈယောကျ ကျွနျတော်ဖွဈရမညျ။ သို့သော် လညျး ယောနကဲ့သို့ ကျွနျတော်ခံစားခဲ့ဖူးသညျ။ ဘုရားသခငျ ကျွနျတော့်ကိုသညျကို ကျွနျတော်သိသော်လညျး ဘုရားသခငျမကျြမှောကျတော်မှ ထှကျပွေးရနျကွိုးစားခဲ့ဖူးသညျ။ မဖွဈနိုငျသောအရာကို လုပျဆောငျရနျ ဘုရားသခငျက ကျွနျတော့်ကို ပွောပါသညျ။
လူငယျကျောငျးသားတဈယောကျက “ကျွနျတော်အမှုတော်လုပျငနျးသို့ မသှားဘူး၊ ကျွနျတော်နာကငျြပကျြစီး သှားမှာကို သိနတေယျ”ဟု ပွောခဲ့သညျ။ အမှုတော်လုပျငနျးမအောငျမွငျမှာ သူစိုးရိမျးနသေညျ။ ကျွနျတော်က “ကျွနျတော် အကွိမျများစှာ ပကျြစီးဆုံးရှုံးခွငျးကွုံတှေ့ခဲ့လို့ ဤအရာများကို နောကျထပျမကွောကျတော့ဘူး”ဟု ပွောခဲ့သညျ။
ဘုရားသခငျခေါ်တော်မူသောလူကို အမှုတော်ဆောငျခွငျးမှတားဆီးသညျမှာ ကွောကျရှံ့စရာဖွဈသညျ။ ဤ အရာသညျ တနညျးတညျးဖွင့် သို့မဟုတျ အခွားနညျးလမျးဖွင့်လညျး အမွဲတမျးကွောကျ စရာဖွဈသညျ။ ဤလူငယျ လေးက သူလုပျဆောငျခဲ့သမျှ၌ အောငျမွငျသူဖွဈသော်လညျး အမှုတော်လုပျ ငနျးကို သူကွောကျရှံ့နသေညျ။ သူ၏ညီငယျ တဈယောကျက “ကျွနျတော့်အဈကိုက ဘယျအရာမဆိုသူ လုပျနိုငျတယျ”ဟု သူ့အဈကိုကို ပွောခဲ့ပမေယ့်ပကျြစီးဆုံးရှုံး ခွငျးကွုံရနျ ကွောကျရှံ့မှုကို သူမချုပျတညျးနိုငျခဲ့ပါ။ သူက အရပျခွောကျပရေှိသညျ။ စာတော်ပွီး တရားဟောရနျ ဆုကျေးဇူး ရှိသူလညျးဖွဈသညျ။ သို့သော် သူသညျ ကွောကျရှံ့သောကွောင့် ဘုရားသခငျမကျြမှောကျတော်မှ ထှကျပွေးခဲ့သညျ။
အသကျတာမှာ သငျယူမိခဲ့သည့်အရာများ လူငယျတှကေို ပွောခငျြပါသညျ။ သမ်မာကမျြးစာက “ငါ့ကို ခှနျအား နှငျ့ပွညျ့စုံစတေော်မူသော ခရဈတော်အားဖွငျ့ ခပျသိမျးသောအမှုတို့ကို ငါတတျစှမျးနိုငျ၏။” ထိုကမျြးပိုဒျကို ကျွနျတော်သကျ သပွေပွီးဖွဈသောကွောင့် ၎င်းငျးသညျ မှနျကနျသညျကို ကျွနျတော် သိသညျ။ ယခုကျွနျတော်အသကျ အနှဈ၈ဝတှငျ ရှိပွီ။ ကငျဆာရောဂါမှ အသကျရှငျရဈသူ၊ ဒူးနာရောဂါရှိ သူတဈယောကျဖွဈပါသညျ။ ဆိုးရှားသောလူနှဈယောကျက အသငျးတော် မှ လူ၃၊၄ယောကျကို အသငျး တော်ခှဲထှကျစဉျအတှငျး ခေါ်သှားခဲ့သေးသညျ။ သို့သော် ထိုအရာများကို ကျွနျတော် ကွောကျရှံ့ခွငျးမရှိပါ။ မိခငျလကျထဲမှ ကလေးငယျတဈယောကျကဲ့သို့ ကျွနျတော်သညျ အေးအေးဆေးဆေးပငျဖွဈသညျ။ ကျွနျတော်ကွောကျရှံ့သလား? အမှနျတကယျတဈစပျကလေးမျှပငျ ကျွနျတော်မကွောကျရှံ့ပါ။ ကျွနျတော်၏အမဘေကျမှ အဘှားက “သငျမှာ ဘာမှကွောကျစရာမရှိဘူး” ဟုပွောခဲ့ဖူးပါသညျ။ သူမပွောခဲ့သညျ့ အရာက စိတျဓါတျကနြတေဲ့အချိနျ မှာ သမ်မတ Franklin D. Roosevelt ပွောခဲ့သောစကားဖွဈသညျ။ ကျွနျတော်အဘှားပွောခဲ့ သညျမှာမှနျကနျ ပါသညျ။
သငျသညျ “ဘုရားသခငျ၏မကျြမှောကျတော်”မှ ထှကျပွေး၍မရပါ။ ဘာကွောင့်လဲ? သငျရှိတဲ့နေ ရာတိုငျးမှာ ဘုရားသခငျသညျ သငျအတူရှိမညျဖွဈသညျ။ ထို့ကွောင့် ယောနပွုသကဲ့သို့ သငျလညျး တာရှုမွို့သို့သှားနိုငျမညျဖွဈသညျ။ ဘုရားသခငျသညျ နရောတိုငျးမှာအတူရှိပွီး တရားဟောဆရာကို ကွီးမား သောဒုက်ခကို ကွုံစမေညျဖွဈသညျ။
အရကျသမားတဈယောကျကို ကျွနျတော်သိခဲ့သညျ။ သူဘုရားသခငျသူ့ကို ခေါ်တော်မူကွောငျးကို စိတျထဲမှ ပိတျဆို့ထားသော်လညျး သူသညျဘုရားသခင့်ခေါ်သံကို နာခံရနျအလှနျကွောကျခဲ့သညျ။ ထို့ကွောင့် သူသညျ ကွောကျ ရှံ့ခွငျးမေ့ပျောကျရနျ ညတိုငျးအရကျသောကျခဲ့သညျ။ သူ၏နာမညျမှာ John Birch ဖွဈပွီး၊ ကျွနျတော်နှင့်အတူကျောငျး နဘေကျလညျးဖွဈသညျ။ အရကျသောကျသမား တဈယောကျ ဖွဈ၍ အိပျဆောငျတှငျ ခိုးကွောငျခိုးဝှကျလုပျနပေါသညျ။
အလေနျဟုခေါ်သော ကျွနျတော်အသိတဈယောကျကိုလညျး ခရဈတော်ထံသို့ ကျွနျတာ်ပို့ဆောငျပေးခဲ့ပါသညျ။ သို့သော်ဤအရာက မလှယျကူလှပါ၊ ဘာကွောင့်လဲ? သူကယျတငျခွငျးရလျှငျကောငျးကငျ ဘုံသှားမညျကို သူကွောကျရှံ့ နခေဲ့သညျ! ဘာကွောင့် သူကကောငျးကငျဘုံသှားရနျ ကွောကျရှံ့နသေလဲ? တနေ့မှာ သူက “ကျွနျတော်ကမျြးစာ ကျောငျးမသှားလို့၊ Presbyterian တရားဟောဆရာတဈယောကျမဖွဈခဲ့လို့ အဖကေ ကျွနျတော်ကို စိတျဆိုးနတေယျ၊ သူ့ကိုတှေ့ရမှာ ကျွနျတော်ကွောကျရှံ့နတောပါ”ဟု ကျွနျတော့်ကို ပွောပွခဲ့ပါသညျ။ အလေနျက ၆ဝနှဈရှိပါပွီ။ တနင်ျဂနှနေေ့၊ Presbyterian ဘုရား ကျောငျးတဈကျောငျးမှာ သူက ကယျတငျခွငျးရရှိရနျ ကွောကျရှံ့နခေဲ့ပါသညျ၊ အကွောငျးမှာ ကောငျးကငျဘုံ၌ သူ့အဖကေသူ့ကို စိတျဆိုးမညျကို ကွောကျရှံ့သောကွောင့်ဖွဈသညျ။ ထိုအတှေးတဈခုကွောင့် နှဈ၄၀ ကျော်တိုငျ သူကစိတျညှငျးပနျးဆငျးရဲခွငျးခံစားနရေသညျ။ သို့သော် လုကာ ၁၅း၁၁-၃၂ ထဲမှ ပျောကျသောသားက အိမျ ပွနျရောကျသောအခါ သူ့၏ဖခငျပွုသကဲ့သို့ သူ့အဖေ (Rev. Mr. Black)လညျး သူ့ကို နှေးထှေးစှာ ပှေ့ဖကျကွိုဆိုဖွဈ ကွောငျး၊ အလေနျကို ကျွနျတော်သှေးဆောငျပွောပွခဲ့ပါသညျ။ အလေနျသညျ ကျွနျတော်ခရဈတော်ထံသို့ ပို့ဆောငျခဲ့ သောသူများထဲမှ ပထမဦးဆုံးသောသူဖွဈသညျ။
ကျွနျတော်ကျောငျးနစေဉျကာလအတှငျ အစညျးအဝေးတဈခုမှာ မိနျးကလေးတဈယောကျလညျး ကယျတငျခွငျး ရရှိခဲ့ပါသညျ။ သူမသညျ ရှကျတတျတဲ့ မိနျးကလေးဖွဈပွီး၊ သူမဒုက်ခရောကျနသေညျကို ကျွနျတော်သတိပွုမိသောကွောင့် သူမကို စကားပွောဖို့ကျွနျတော်သှားလိုကျသညျ။ သူမက “ကျွနျမကယျတငျခွငျးရတာ ကျွနျမအမကေို ပွောဖို့ကွောကျ တယျ”ဟု ပွောသောအခါ ကျွနျတော်က “သှားပွီး သင့်အမကေိုပွောပါ၊ သူသင့်ကို ဘာမှမလုပျပါဘူး”ဟု ပွနျပွောခဲ့ သညျ။ တကယျတော့မမှနျပါ။ သူမကယျ တငျခွငျးရသညျကို သူမမိခငျကွားသိခဲ့သောအခါ၊ သူမကိုအိမျပေါ်က နနေှငျ ထုတျခဲ့ပါသညျ။ ငိုကွှေးနေ သည့်မိနျးကလေးတဈယောကျကို ကျွနျတော်မွငျခဲ့တာပါ။ ကျွနျတော်က သူမကို “ကျွနျတော် သှားပွီး၊ သင့်အမနေှင့် စကားပွောပါရစေ” ဟုပွောပွီး၊ အဝတျအစားပွငျဆငျဝတျဆငျပွီး၊ သူမမိခငျကိုတှေ့ရနျ သှားခဲ့ သညျ။ သူမမိခငျက ကျွနျတော်ကို သိသှားသောအခါ ကျွနျတော့်ကို အော်ဟဈပါတော့သညျ။ နောကျဆုံး သူမမိခငျ၏ဧည့်ခနျး ထဲသှားပွီး ကျွနျတော်က “ခငျဗျားသမီးကို အိမျပွနျမလာခိုငျးဘူးလား”၊ သူက “သူမလိငျဆကျဆံပွီး မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲ နခေျိနျမှာ ငါသညျးခံနိုငျခဲ့တယျ၊ အခု သူခရဈယာနျဖွဈပွီ! နောကျထပျသူ့ကို ဒီအိမျမှာ နခှေင့်ပွုမှာမဟုတျဘူး”ဟု သူမ မိခငျကို ကျွနျတော့်ကို ပွောခဲ့သညျ။
သနားစရာကောငျးသည့် မိနျးကလေးက ဘုရားကျောငျးထဲ၌ တဈစုံတဈယောကျ၏အိမျမှာ ရှေ့ ပွောငျးခဲ့သညျ။ သူမအလုပျရပွီး၊ ကောလိပျလညျး ပွီးသှားသှားပွီးဖွဈသညျ။ နောကျဆုံးတှငျ သူမသညျ ခရဈယာနျကောငျလေးတဈ ယောကျနှင့်ထိမျးမွှားခဲ့သညျ။ သူမ၏မင်ျဂလာပှဲသို့ သူ့မမိခငျမတကျရောကျနိုငျသညျကို ကျွနျတော်နားလညျပါသညျ။ ထို လငျမယားနှဈယောကျသညျ ဥရောပနိုငျငံထဲ၌ သာသနာပွုရငျး နထေိုငျခဲ့သညျ။ ကျွနျတော်တို့လညျး သူတို့နှဈယောကျ ကို လစဉျငှကွေေးထောကျပံ့ ကူညီပေးခဲ့ပါသညျ။
တဈနေ့၌ သူမမိခငျ၏အိမျရှေ့တံခါးတှငျ သတငျးစာများစုပုံနသေညျကို ကျွနျတော်ကွားသိခဲ့ရသညျ။ ရဲများက တံခါးကိုရိုကျချိုးပွီး၊ ဗာလာဗော့ဒျပုလငျးဆုပျကိုငျထားပွီး ကွမျးပွငျပေါ် သဆေုံးနသေည့် သူမမိခငျကို တှေ့ခဲ့သညျ။
အိုး၊ ခရဈယာနျနှင့် သာသနာပွုသူတဈယောကျဖွဈလာရနျ မကျြရညျနှင့်နာကငျြမှုများ ဘယျလောကျခံစားနရေပါ လိမ့်! သို့သော် သူမ၏ကွောကျရှံ့မှုများကို ကျော်ဖွတျရနျ ယရေှုခရဈတော်ကို ကိုးစား သူဖွဈပွီး၊ သာသနာကှငျး၌လညျး ခရဈတော်နောကျလိုကျသူတဈယောကျဖွဈသညျ။ သူမက ယရေှပွောသမျှကို ကွားပွီး၊ နာခံဖို့ရနျ ဝိညာဉျပိုငျးဆိုငျရာ ကွီးထှားနခေဲ့ပွီ။
အားလုံးမတျတပျရပျပွီး၊ ရှငျမဿဲ ၁ဝး၃၄-၃၉ သို့သှားပေးပါ
“မွပေေါ်သို့ ငွိမျသကျခွငျးကို စလှေှတျအံ့သောငှါ ငါလာသညျဟု မထငျကွနှငျ့။ ငွိမျ သကျခွငျးကို စလှေှတျအံ့သောငှါ ငါလာသညျမဟုတျ။ ထားကို စလှေှတျအံ့သောငှါ ငါလာသတညျး။ အဘနှငျ့သား၊ အမိနှငျ့သမီး၊ ယောက်ခမနှငျ့ ချွေးမအခငျြးခငျြး ကှဲပွားစခွေငျးငှါ ငါလာသတညျး။ ကိုယျအိမျသူ အိမျသားတို့သညျလညျး ကိုယျ ရနျသူ ဖွဈကွလိမျ့မညျ။ အကွငျသူသညျ ငါ့ကိုခဈြသညျထကျ မိဘကိုသာ၍ခဈြ၏။ ထိုသူသညျ ငါနှငျ့မထိုကျမတနျ။ အကွငျသူသညျ ငါ့ကိုခဈြသညျထကျ သားသမီးကို သာ၍ခဈြ၏။ ထိုသူ သညျငါနှငျ့မထိုကျမတနျ။ အကွငျသူသညျ မိမိလကျဝါးကပျတိုငျ ကို ထမျး၍ ငါ့နောကျသို့မလိုကျ၊ ထိုသူသညျ ငါနှငျ့ မထိုကျမတနျ။ မိမိအသကျ ကို တှေ့သောသူသညျ အသကျရှုံးလိမျ့မညျ။ ငါ့ကွောငျ့ မိမိအသကျရှုံးသောသူမူကား အသကျကို တှေ့လိမျ့မညျ။” (ရှငျမဿဲ ၁ဝး၃၄-၃၉)
သငျတို့ထဲမှ တချို့သောသူ၏မိဘများက သငျတို့ကို ဘုရားကျောငျးမှထှကျခှာသှားရနျ သူတို့ အတတျနိုငျဆုံး ကွိုးစားအားထတျကွလိမ့်မညျကို ကျွနျတော်သိပါသညျ။ သို့သော် အပေါ်မှမိနျးကလေးသညျ သူ၏ရဲဝံ့ခွငျးသတ်တိ ဥပမာ တဈခုကို ငါတို့အားပွခဲ့ပွီးသညျကို သတိရပါ။ ထိုမိနျးကလေးကဲ့သို့ လုပျလျှငျ သငျတို့မိဘသညျ သငျတို့ကို ခဏသာမျှ စိတျ ဆိုးလိမ့်မညျ၊ သို့သော်သငျတို့၏အသကျတာကို မွငျ ခွငျးအားဖွင့်၊ နောကျနောငျတှငျ သငျတို့နှင့်အတူ ဘုရားကျောငျးသို့ ရောကျရှိလာမညျဖွဈသညျ။ မိဘများက သငျတို့ကိုလကျမခံရငျတောငျ ခရဈတော်နောကျလိုကျရနျ ယုံကွညျခွငျးရှိရမညျ။ ယောနကဲ့သို့ ဘုရား သခငျ၏မကျြမှောကျတော်မှ ရှောငျပွေးရနျ မကွိုးစားပါနဲ့!
တရုတျအသငျးတော်မှာ ကျွနျတော်နှင့်ရငျးနှီးသောသူငယျခငျြး၊ ဘနျနှင့်ဂကျြဟုခေါ်သောသူငယျ ခငျြးနှဈ ယောကျရှိခဲ့သညျ။ ဘနျက ဒေါ်တာလငျးကို ဆန့်ကငျြသော ဘာသာရေးသမားတဈယောကျ ဖွဈသညျ။ နောကျဆုံးတော့ သူကသူ့ကောငျမလေးနှင့်ခိုးပွေးသှားခဲ့ပါသညျ။ သူ့ကို နောကျတဈကွိမျထပျ မတှေ့တော့ပါ။ ဂကျြက ဆေးသငျတနျးတကျ နသေညျ။ သို့သော် ဤအရာကို သူမကွိုကျ၍ Talbot စာသငျကျောငျးသို့သှား၍ တရားဟောဆရာ တဈယောကျဖွဈလာ ခဲ့သညျ။ သူသညျ ကျွနျတော့်၏အရငျးနှီး ဆုံးသူငယျခငျြးတဈယောကျပါ။ ကျွနျတော်က သူ့မင်ျဂလာဆောငျ၌ အရံသတိုးသား တဈယောကျလုပျပေး ခဲ့သညျ။ သူသညျ ကျွနျတော်တို့၏အစညျးအဝေးတဈခုမှာ ခရဈတော်ကို ယုံကွညျလကျခံသူ လညျးဖွဈ သညျ။ ထို့နောကျ သူစာရေးခဲ့သညျမှာ “နှဈအနညျးငယျကွာပွီးနောကျ ဤအရာက ကျွနျတော့်အဖနေှင့်အမေ ၏ကယျတငျခွငျး၏အသီးကို သီးစခေဲ့သညျ။ Sunday School ဆရာအဖွဈလုပျဆောငျပွီး၊ ကလေးများ၏အသကျတာ ကို အကျိုးသကျရောကျစပွေီး၊ အသငျးတော်ကွီးထှားမှုအတှကျလညျး အကူအညီဖွဈ စခေဲ့သညျ။”
၂။ ဒုတိယ၊ ယောန၏ဝဒေနာ
“သို့သော်လညျး၊ ယောနသညျ ထာဝရဘုရားထံတော်မှတာရှုမွို့သို့ပွေးမညျ့ အကွံရှိ သညျနှငျ့ ထလကျြယုပ်ပမွေို့သို့သှား၍ ရောကျသဖွငျ့၊ တာရှုမွို့သို့သှား သောသင်ျဘော ကို တှေ့ကွုံ၍ သင်ျဘောခကိုပေးပွီးလျှငျ၊ ထာဝရဘု ရားထံတော်မှ သင်ျဘောသား တို့နှငျ့အတူ တာရှုမွို့သို့လိုကျခွငျးငှါ သင်ျဘောကို စီးလ၏ေ။ ထာဝရဘုရားသညျ လညျး ပွငျးစှာသောလကေို ပငျလယျပေါ်သို့ စလှေှတျတော်မူ သဖွငျ့၊ ပငျလယျ၌ ကွီးစှာသော မိုဃျးသကျမုနျ တိုငျးဖွဈ၍၊ သင်ျဘောသညျ ပကျြလုသောလက်ခဏာ ရှိ၏။” (ယောန ၁း၃-၄)
ကွည့်ပါ၊ မိုဃျးသကျမုနျတိုငျးက ဘုရားထံမှဖွဈသညျကို ယောနသိသညျ။
“ငါ့ကိုချီ၍ ပငျလယျထဲသို့ ခပြဈကွလော့။ သို့ပွုလျှငျ၊ လှိုငျးတံပိုးသညျ သငျတို့၌ ငွိမျးလိမျ့မညျ။ ဤပွငျးစှာသော မိုဃျးသကျမုနျတိုငျးသညျ ငါ့ကွောငျ့သာ သငျတို့ အပေါ်သို့ ရောကျသညျကို ငါသိ၏ဟု ပွနျပွောသော်လညျး၊” (ယောန ၁း၁၂)
နောကျဆုံး၌ သင်ျဘောသားသညျ ယောနကိုပငျလယျထဲသို့ ပဈခလြိုကျသောအခါ မိုဃျးသကျမုနျတိုငျးသညျ ရပျတန့်ခဲ့သညျ။
“ယောနကို မျိုစခွေငျးငှါ ငါးကွီးကို ထာဝရဘုရား ခနျ့ထားတော်မူသညျနှငျ့ အညီ၊ ယောနသညျ ငါး၏ဝမျးထဲမှာ သုံးရကျပတျလုံးနရေ၏။ ငါး၏ဝမျးထဲမှာနစေဉျတှငျ၊ ယောနသညျ မိမိဘုရားသခငျ ထာဝရဘုရားကို ဆုတောငျး သောစကားဟူမူကား၊” (ယောန ၁း၁၇၊ ၂း၁)
အစ၌ ဤအရာကိုယုံကွညျရနျခကျခဲလှပါသညျ။ သို့သော် ဤအဖွဈအပကျြသညျ သခငျယရေှု၏ပုံဆောငျခွငျး ဖွဈသောသူ၏အသခေံခွငျး၊ သဂွိုလျခွငျးနှင့်သခွေငျးမှ ရှငျပွနျထမွောကျခွငျးကို ဖော်ပွ သညျကို တှေ့ခဲ့ရပါသညျ။
နောကျအကွာတှငျ Dr. M. R. DeHaan ပွောခဲ့သော ယောနနှင့်ငါးကွီးအကွောငျးကို ဖတျရှုခဲ့ရပါသညျ။
ဤစာအုပျသညျ ရှငျပွနျထမွောကျခွငျး၏ ကွိုတငျဟောပွောခွငျးဖွဈသညျ။ သခငျ ယရေှုကိုယျတိုငျ မိန့်တော်မူသညျမှာ ယောနသညျ နိနဝေမွေို့သားတို့အား နိမိတျ လက်ခဏာဖွဈသကဲ့သို့ သူသညျသခွေငျးမှရှငျပွနျ ထမွောကျခွငျး၌ သူ၏မျိုးဆကျ များအတှကျ နိမိတျလက်ခဏာဖွဈလိမ့်မညျ။ ယောနစာအုပျလေးသညျ ယရေှု ခရဈတော်၏ ရှငျပွနျထမွောကျခွငျးကိုသှနျသငျ၊ ပုံဖော် သညျ။ (သမ်မာကမျြးစာ, ယောန၏ရှငျပွနျထမွောကျခွငျး စာအုပျမှမှတျစု၊ အမှတျ ၃၊ စာမကျြနှာ ၇၃၉).
ယောန ၁း၁၇ ကို ကွည့်ပါ။
“ယောနကို မျိုစခွေငျးငှါ ငါးကွီးကို ထာဝရဘုရား ခနျ့ထားတော်မူသညျနှငျ့အညီ၊ ယောနသညျ ငါး၏ဝမျးထဲမှာ သုံးရကျပတျလုံးနရေ၏။ ငါး၏ဝမျးထဲ မှာနစေဉျတှငျ၊” (ယောန ၁း၁၇)
ယခုယောနကမျြးတှငျ အရေးကွီးဆုံးဖွဈသော ယောန ၂း၉မှ နောကျဆုံးစကားလုံးငါးခုကိုကွည့်ပါ။
“ထာဝရ ဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်” (ယောန ၂း၉ ခ)
ကျွနျတော်ဒီမှာရပျပွီး၊ ငါးကွီးဗိုကျထဲမှာ ဝဒေနာခံစားနတေဲ့ ယောနအကွောငျးနှင့်ပါတျသတျ၍ ကျွနျတော်ရဲ့ ကိုယျပိုငျထငျမွငျခကျြကို ပေးပါရစ။ေ
အခွားညတှငျ ယောနကမျြးကိုဖတျရှုစဉျ ကျွနျုပျတဈခါမှ မစဉျးစားဖူးသောအရာတဈခုကို ကျွနျုပျတှေ့လိုကျ ရသညျ။ ပုံမှနျအားဖွင့် နိူးထမှုသညျ အပွငျပနျးအခွအေနမေျားအားဖွင့် “ဖွဈစသေညျ” လူသိ များသောတရားဟော ဆရာများက coronavirus သညျ နိူးထမှုကို “မီးပှား”စလေိမ့်မညျ ဟုဆိုကွသညျ။ ထိုအရာအကို ကျွနျတော်အပွည့် အဝမယုံကွညျပါ!!! ၎င်းငျးသညျ Finny ၏ထငျမွငျခကျြတဈခုဖွဈပွီး လုံးဝမမှနျပါ။
သို့သော် မှနျကနျသောအခကျြက -“၎င်းငျးသညျအစပွုသညျ” (ယနေ့ခတျေအသဈသော ဧဝံဂလေိများသုံးနှုနျး သောစကားလုံးများကို ကျွနျတော်မုနျးသညျ) - နှိုးထမှုသညျ ဘုရားသခငျအားဖွင့်သာ “အစပွုသညျ၊” “ထာဝရဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်” (ယောန ၂း၉ခ)။
သို့သော် တခွားညတှငျ ကျွနျတော်ရှငျးရှငျးလငျးလငျးမွငျတှေ့ခဲ့သောအခကျြက - ကွီးမားသောနှိုးထမှု၏သမိုငျး တှငျ အရေးပါသောနှိုးထမှုအားလုံးသညျ ဒုက်ခဆငျးရဲခွငျးခံသော ခေါငျးဆောငျများအား နှင့်အတူအစပွုသညျ။ ကျွနျတော် စိတျထဲလာသောသူအချို့ကို အမညျတပျပေးပါမညျ။
John Wesley – ပထမနိုးကွားမှုမတိုငျမီ သူတှေ့ကွုံခံစားတဲ့ သူ၏ဒက်ခဝဒေနာများကို ဖော်ပွပေး ပါသညျ။ သူဟာ Georgia တှငျ သာသနာပွုတဈယောကျအနဖွေင့် ကဆြုံးခဲ့ဖူးသူတဈ ယောကျဖွဈပါသညျ။ သူသညျ နတျဆိုးများနှင့်သဘောထားကှဲလှဲမှုများ အတှေ့အကွုံရှိ သညျ။ သူသညျ မီးရှို့ခံခဲ့ရပွီး သလေုနီးပါးဖွဈခဲ့သညျ။ သူ့သူငယျခငျြး George Whitefield က လညျး သူနှင့်အဆကျအသှယျ ဖွတျထောကျခဲ့သညျ။ သူ၏သာဘာဂိုဏျးအားဖွင့် အသရေ ပကျြအောငျ ပွောဆိုခွငျးခံခဲ့ရသညျ။ သူ့အဖအေသငျးတော်၌ အသပေကျြပွောဆိုခွငျးခံခဲ့ရပွီး ပှဲတော် မင်ျဂလာနှင့်ပါတျသတျ၍ တခွားသငျးအုပျဆရာ၏ ငွငျးပယျခွငျးခံရသညျ။ သူ့ ဆံပငျကို ဆှဲထုတျပွီး ထားခဲ့သည့် အမျိုးသမီးတဈယောကျနှင့် သူထိနျးမွှားခဲ့သညျ။ ထို့နောကျ Wesley က သူ၏ပငျတဂေုတျတနေှင့်ပါတျသတျ၍ အတှေ့ရှိခဲ့ သညျ။ ထိုအချိနျမှစ၍ သူသညျ ပငျတကေုတ်တပှေဲနေ့ကို ကိုယျတိုငျကွုံတှေ့ခဲ့ရသညျ။ ထောငျနှင့်ချီသောလူတို့သညျ သူ၏ ဟောပွောခကျြကိုကွားရရနျ ရာသီဥတုအေးခဲသည့်နရော၌ မတျတပျရပျစောင့်ဆိုငျးနကွေ သညျ။ သူ၏ဘဝနှင့်အလုပျကို ဘုရငျရှေ့နကေ “ဤမျှလောကျများစှာသောစိတျကို အဘယျသူ တဈဦးတဈယောကျကမှ မလှှမျးမိုးခဲ့ပါ။ ဤမျှလောကျများစှာသော နှလုံးသားကို တိုးထိတဲ့အသံ တဈခုမျှမရှိပါ။ အဘယျသူမျှဘဝရဲ့အလုပျမျိုး အင်ျဂလနျအတှကျ လုပျဆောငျခဲ့သူမရှိပါ။” စာအုပျ ထုတျဝသေည့်နရောတဈခုက “John Wesley ဟာ တနျခိုးရှိတဲ့တရားဟော ဆရာများထဲမှ တဈယောကျဖွဈတယျ”ဟု ပွောခဲ့သညျ။
Marie Monsen – သူမသညျ တရုတျပွညျ၌ နိုးထမှုအတှကျ အစာရှောငျဆုတောငျးခွငျးစတငျ ခဲ့သညျ။ နတျဆိုးက သူမကို မွှကွေီးရဈခှသေလို မွကွေီးပေါ်ဆှဲခခြဲ့သညျ။ သူမသညျ မညျ သည့်အကူညီ၊ ပံ့ပိုးမျှမရှိဘဲ၊ တဈယောကျတညျး မိနျးကလေးသာသနာပွုဆရာမ အနဖွေင့်ရပျ တညျပွီး ယနေ့ခတျေ တရုတျပွညျ၏ ကွီးမားသောနိုးထမှုအတှကျ ဆုတောငျးပေး နခေဲ့သညျ။
Jonathan Goforth–သညျ သူ့ဇနီးနှင့်အတူ တရုတျပွညျသို့သှားပွီး၊ ကွီးမားသောဒုက်ခဝဒေနာ များခံစားခဲ့သညျ။ သူတို့၏ကလေး (၄)ယောကျသဆေုံးသှားခဲ့သညျ။ Mr. Goforth သညျ နှဈကွိမျတိုငျတိုငျ သလေုနီးပါးဖွဈခဲ့သညျ။ သူ့ကလေးအလောငျးတှကေို သဂွိုလျရနျ (၁၂) နာရီတိုငျတိုငျ လှညျးဖွင့်သှားခဲ့ရသညျ။ မစ်စဈဂေါ့ဖျနှင့်သူမ၏ကလေးများ မညျသို့ခံစားခဲ့ရ သညျကို သင့်အားပွောပွရနျ ဆန်ဒရှိသညျ။ သူတို့၏သမီးလေး Constance သဆေုံး သော အခါ “အောကျ တိုဘာလ ၁၃၊ ၁၉၀၂ခုနှဈတှငျ သူ့အဈမတို့၏အုတျဂူဘေး၌ သမီးလေး Constance ကို သဂွိုလျခဲ့ပါသညျ။”
ကွီးမားသော နိုးထမှုမီးသညျ Goforth၏အစညျးအဝေးပှဲ၌ ကရြောကျခဲ့ပါသညျ။ ဆု တောငျးခွငျးအတှကျ အခှငျးအလမျးတဈခုသညျ ရောကျရှိခဲ့သညျ။ Mrs. Goforth က “မိုး ကွိုးမုနျတိုငျး၏ရုတျတရကျ၊ အကွမျးဖကျမှုနှင့်အတူရောကျရှိလာသညျ၊ ဒါကွောင့် ဆုတောငျး ခွငျးမုနျတိုငျးနှင့်အတူ ဤအရပျ၌ရှိသညျ။ ထိနျးချုပျမှုနှင့် ကွိုးစားအား ထုတျမှုမရှိပါသဖွင့် ဘုရားသခငျနှင့် ဝေးကှာစှာသှားလာသူအချို့သညျ ယခုသူတို့၏ အပွဈများကို လူသိရှငျကွား ဝနျခတြောငျးပနျလကျြ ပွနျလာလာကွသညျ။ စိတျရှုပျထှေး မှုမရှိခဲ့ပါ။ အသငျးတော်တဈခုလုံး သညျ ဆုတောငျးခွငျး၌ တညီတညှတျတညျးရှိကွသညျ။ ကျွနျုပျတို့အားလုံးသညျ ဒူး ထောကျ ရာမှ အစညျးအဝေးများသို့ တိုကျရိုကျသှားကွသညျ။ အိုး၊ ဝမျးမွောကျခွငျး၊ ဘုနျးအသရကွေီး မွတျပသေညျ!..ခေါငျးကို ညှှတျ၍ ‘ငွိမျဝပျလကျြနကွေလော့၊ ငါကား ဘုရားသခငျဖွဈ သညျဟု သိမှတျကွ လော့။’ဟူသော ဘုရားသခင့်အသံတော်ကို နားထောငျနိူငျသညျ။ ယခု ‘ဤအမှုသညျ ဗိုလျခွအေားဖွင့်မဟုတျ၊ အာဏာတနျခိုးအားဖွင့်မဟုတျ၊ ငါ့ ဝိညာဉျအား ဖွင့် ဖွဈလိမ့်မညျဟု ကောငျးကငျဗိုလျခွအေရှငျ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏’ဟူ သောအရာကို ကျွနျတော်တို့သငျယူခဲ့ပါသညျ။
မိမိတို့၏အပွဈများကိုဝနျခံရနျလူပေါငျး ၇၀၀ ကျော်တို့သညျ ရှေ့မှောကျ၌ လူများစုရုံးနကွေ သညျ။ အစညျးအဝေးများကို အဆုံးသတျရနျခကျခဲသညျ။ အစညျးအဝေးတဈခုစီသညျ ၃ နာရီ ခန့်ကွာပွီး အစညျးအဝေးတဈခုလုံးသညျ တဈနေ့လုံးကွာခဲ့သညျ။ ယခုချိနျမှစ၍ ဘဝ တဈခုစီ၏ အတှေ့အကွုံ၌ ပိုကောငျးသောအရာတဈခုသို့ ဆကျသှားရနျ Goforthက ပွောကွားခဲ့ သညျ။ ဤသူတို့သညျ ဘုရားသခငျထံသို့ ငိုကွှေးပွီး၊ တညျငွိမျတငျးကပျြသူများဖွဈကွသည့် ပရကျ(ဈ)ဘကျတီးရီးရမျ(ဈ)ဖွဈကွသညျ။ မျှမကွာမီ အားကွီးသောပရကျ(ဈ)ဘကျတီးရီးရမျ (ဈ)တဈယောကျပေါ်လာပွီး ထိုသူသညျ သူ့အခနျးထဲတှငျ နာကငျြဝဒေနာကွား၌ ရှိုကျငိုနေ သည့်သူ တဈယောကျဖွဈသညျ။” Mrs. Goforth က “ထိုသို့သောဆုတောငျးခကျြများ သညျ ရိုးရှငျးမှုရှိရနျ နှင့်စိတျခရြနျဖွဈသညျ။ ဒီလိုအခွအေနမေျိုးမှာ ရှိနရေတာ တကယ့်ကို လှုံ့ ဆော်မှုတဈခုပါ!”
“လူဖွူသာသနာပွုများသညျ သူတို့၏တရုတျညီအဈကိုများနှင့်အတူ သူတို့၏အမှားများ၊ အပွဈများနှင့်အားနညျးခကျြများကို ဝနျခံခဲ့သညျ။ ထိုအချိနျသညျ တရုတျ သာသနာပွုများ၊ ခရဈတော်၌အတူတကှ ပေါငျးစညျးသောကွောင့် အားလုံးစုစညျးရမည့် အချိနျဖွဈသညျ။ ယရေှု က “ငါတို့သညျ တလုံးတဝတညျးဖွဈသကဲ့သို့၊ အကျွနျုပျသညျ သူတို့၌ရှိ၍၊ ကိုယျတော်သညျ လညျး၊ အကျွနျုပျ၌ ရှိတော်မူသောအားဖွငျ့ သူတို့သညျတလုံးတဝတညျးဖွဈ၍၊ တလုံးတဝ တညျး၌ စုံလငျစခွေငျးငှါ၎င်းငျး” ပွောကွားခဲ့ပါသညျ။
တရုတျပွညျ၌ Dr. Goforth နှင့်ပွုလုပျခဲ့သော အစညျးအဝေးကဲ့သို့ ကျွနျတော်တို့အသငျးတော် ၌လညျး ပွုလုပျခဲ့ပါသညျ။ ကျွနျတော်က “အပွငျပနျး”အားဖွင့် ရညျရှယျခကျြအပေါ်ပွောသညျ။ သို့သော် အသငျးတော်မှ အချို့ သော“ခေါငျးဆောငျ”များက သူတို့အပွဈဝနျခတြောငျးပနျသောအခါ ဘုရားသခငျကို လိမျခဲ့သညျ။ ထို့ကွောင့် Dr. Tozer ပွောခဲ့သည့်အတိုငျး သူတို့သညျအပွဈနှဈမျိုးဖွဈသော လိမျညာခွငျးအပွဈ၊ ဘုရားနာမကို လိမျညာခွငျးအပွဈတို့ကို ကျူး လှနျခဲ့သညျ။ Kreighton သညျ “ပွည့်စုံရနျ” “ဟောပွောရနျ” မလိုပါဟု Dr. Cagan အားလိမျပွောခဲ့သညျ။ ဤဝမျး နညျးစရာလူငယျလေးက ရိုးသားစှာနောငျတရခဲ့သည့်ပတေရုထကျ၊ ယရေှုခရဈတော်ကို သစ်စာဖောကျခဲ့သော ယုဒကဲ့သို့ ဖွဈလာခဲ့သညျ။
Jonathan Goforth၏ အောကျတှငျဖွဈပေါ်သော စဈမှနျသောနိုးထမှုသညျ ၁၉၆ဝခုနှဈ၊ တရုတျနိုငျငံ၌ အခွားဝိညာဉျဆုကျေးဇူးများပါဝငျဘဲ နောငျတနှင့်ဆုတောငျးခွငျးဖွင့် ဖွဈပေါ်လာသည့်နှိုးထမှုကဲ့သို့ဖွဈသညျ။ ဝမျးနညျးစရာ က “ယုံကွညျမှုနှင့်နောငျတ” သညျ စိတျခံစားမှုသာဖွဈပွီး စိတျရငျးမှနျမဟုတျကွောငျးကို ကျွနျုပျထငျသညျ။ Kreighton နဲ့ Griffith တို့ကဲ့သို့ လူတှကေ ဘုရားသခငျကိုလူမိုကျဟု ထငျနပေုံရလို့ အံ့သွနတေုနျးပါ။ မကျြစိကနျးတာပဲ!!
လှနျခဲ့သောညတှမေှာ ကျွနျုပျ၏ရခေျိုးခနျး၌ဤတရားဒသေနာကို ရေးသားနစေဉျ ကျွနျုပျသညျ ရခေျိုးကနျ၏ အစှနျးတှငျထိုငျနသေညျ။ ထို့နောကျ ကျွနျတော်ချှော်လဲ၍ ရခေျိုးကနျအစှနျးနဲ့ဦးခေါငျးထိမိခဲ့သညျ။ ခွဆေံ့၍လဲလှောငျးနေ သညျ။ တဖွညျးဖွညျးတှန့်လိမျရနျ ကွိုးစားခဲ့သော်လညျးမရပါ။ ရခေျိုးကနျအတှငျး ရုနျးမရဖွဈနစေဉျ လညျပငျးကျိုးပွီဟုထငျ မိသညျ။ သို့သော် ခွခေျောငျးတှကေို လှုပျလိုကျတော့ ငါ့ကျောရိုးမကျိုးဘူးဆိုတာကို သိလိုကျပါသညျ။
ထိုဆိုးဝါးသောအခွအေနသေို့ ရောကျနသေညျနှင့်အမျှ စဈမှနျသောနိုးထမှုတဈကို ကျွနျတော် တို့ဘယျတော့မှ ပွနျမရနိုငျတော့ဘူးဟု စာတနျကပွောသညျ။ ထိုအရာက Wesley, Marie Monsen နှင့် Jonathan Goforth ကဲ့သို့သောသူများနှင့် John Sung တို့ကဲ့သို့သောသူများသညျ အလှနျကွီး စှာသောစမျးသပျမှု အတှေ့အကွုံအား ဖွင့်သော်၎င်းငျး၊ ကွီးမားသောငါးကွီး၏ဗိုကျထဲမှ ယောနကဲ့သို့သော်၎င်းငျး ဘုရားသခငျသညျ ထိုကဲ့သို့သောနိုးထမှုနှင့်အတူ သူတို့ကို မယုံကွညျနိုငျမီတိုငျ အောငျ ထိုအဖွဈ အပကျြများကို အရငျကွုံစခေဲ့သညျ။ ဘုရားသခငျပွသခဲ့သညျမှာ သမိုငျး တှငျ အကွီးမားဆုံး သောနိူးထမှုသညျ ထိုကဲ့သို့ ပုဂ်ဂိုလျများ၏နောကျ၌ လိုကျလာသညျကို ပွသခဲ့သညျ။ ယခုကျွနျုပျတို့ တကယ့်နိုးထမှုရနိုငျမလား။? ဖွဈနိုငျပါသညျ။ သို့သော် ကျွနျုပျတို့သညျ အလှနျရိုးသားဖွောင့်မတျသူဖွဈရမညျ။ ထိုသို့ မဟုတျပါက ဘုရားသခငျသညျ စဈမှနျသောနိုးထမှုကို စလှေတျလိမ့်မညျမဟုတျပါ။
ယောနကဲ့သို့ပငျ သငျးအုပျဆရာ Richard Wurmbrand သညျ ကှနျမွူနဈအကဉျြးထောငျတှငျ ငါးနှဈ နခေဲ့သညျ။ သူသညျ ထို ၁၄ နှဈထဲမှသုံးနှဈကို တဈဦးတညျးချုပျနှောငျထားခဲ့ပွီး ကှနျမွူနဈ ညှဉျးပနျးနှိပျစကျသူများမှလှဲ၍ မညျသူကိုမျှ မတှေ့ခဲ့ရပါ။ ဘာကွောင့် ဘုရားသခငျက Wurmbrand ကို ထိုအရာကို ကွုံစတောလဲ? အကယျ၍ သငျသညျ သူ၏စာအုပျများကို ဖတျရှုပါက ဘုရားသခငျသညျ အကဉျြးထောငျကို အသုံးပွုပွီး ခဈြတတျဖို့၊ ရိုးသားဖို့ သူ့ကိုသငျပေးခဲ့သညျ။ Richard Wurmbrand ကဲ့သို့ စိတျရိုးသားဖွောင့်သောသူနှင့် ကျွနျုပျတှေ့ဆုံခဲ့ဖူးခွငျးမရှိပါ။ သူသညျ အကဉျြးထောငျမှလှတျလာပွီး တဈ ကမ်ဘာလုံးကိုရိုးသားစှာစကားတတျရနျ အကဉျြးထောငျထဲ၌သငျယူခဲ့သညျ။ Kreighton and Griffith တို့ သညျ ဘယျတော့မှရိုးသားသောသူများ မဖွဈခဲ့ပါ။ သူတို့သညျ အပွဈများကို “ဝနျချ တောငျးပနျ” ခဲ့ကွပွီး သူတို့အတှကျ မညျသည့်တနျဖိုးမျှမရရှိခဲ့ပါ။
Wesley, Marie Monsen နှင့် Jonathan Goforth တို့သညျ တိကပြွီး၊ လေးနကျသောသူများဖွဈ ကွသညျ။ ယောနလညျး ထိုကဲ့သို့ပငျဖွဈသညျ။
Dr. A. W. Tozer က “အကယျ၍ ၎င်းငျးကိုလုပျဆောငျရနျ ငါတို့မိုကျမဲနခေဲ့မယျဆိုရငျ ဘုရားသခငျကို ငါတို့တောငျးလျှောကျတဲ့ နိုးထမှုသညျ တဈနှဈပတျလုံးအခညျြးနှီးဖွဈလိမ့်မညျ။ (သို့မဟုတျ) ယခု နာခံခွငျး၏ ကောငျးကွီး မင်ျဂလာကို နာခံရနျနှင့်သငျယူရနျ အစပွုနိုငျပါသညျ။ ဘုရားသခငျ၏နှုတျကပတျတော်သညျ ကျွနျုပျတို့ရှေ့၌ရှိ သညျ။ ကျွနျုပျတို့အနဖွေင့် လုပျဆောငျရနျမှာ ထိုနှုတျကပတျတော်၌ရေးသားထားသမျှကို ဖတျရှုရနျနှင့်လယျကှငျး၌အသီးအနှံများ ကို စိုကျပျိုးပွီးမှ ရိတျသိမျးသကဲ့သို့ ဘုရားသခငျ၏နိုးထမှုသညျ ရောကျရှိလာမညျဖွဈသညျ” (“နှိုးထမှုကဘယျ လိုလဲ?-အပိုငျး၂”)။ ဘုရားသခငျကွည့်ရှုနသေည့်အရာသညျ ရိုးသားမှုသညျဖွဈသညျ။
“မိတ်တဲ၏သား ယောနသို့ရောကျလာသော ထာဝရဘုရား၏ နှုတျကပတျတော်ဟူမူကား၊ သငျထ၍ နိနဝေမွေို့ကွီးသို့ သှားပွီးလျှငျ၊ ခွိမျးချောကျသောစကားနှငျ့ ကွှေးကွော်လော့။ ထိုမွို့ပွုသော ဒုစရိုကျအပွဈ သညျ ငါ့ရှေ့သို့ တကျလာပွီဟု မိနျ့တော်မူ၏။” (ယောန၁း ၁-၂)
(ဓမ်မရာဇဝငျစတုတ်ထစောငျ ၁၄း၂၅၊ ရှငျမဿဲ ၁၂း၃၉-၄၁၊ လုကာ ၁၁း၂၉-၃၀)
၁။ ပထမ၊ ယောန၏ခေါ်ြခငျး၊ ယောန ၁း၁၊၂၊၃၊ ဖိလိပ်ပိ ၃း၁၃၊ ရှငျမဿဲ ၁၀◌း၃၄-၃၉
၂။ ဒုတိယ၊ ယောန၏ဒုက်ခဝဒေနာ၊ ယောန ၁း၃-၄၊ ၁၂၊ ၁း၁၇-၂း၁၊ ၁း၁၇၊ ၂း၉ခ